सार्वजनिक प्रशासन जब | USAHello देखि काम र पेसा स्रोतहरू | USAHello
सार्वजनिक प्रशासन जब र करियर
सार्वजनिक प्रशासन जब र गैर लाभ को विभिन्न प्रकार र सार्वजनिक सेवा काम बारे जान्नुहोस्. विभिन्न पेसा बाटाहरू पढ्न तपाईं सार्वजनिक प्रशासन मा लाग्न सक्छ. पत्ता तपाईं के प्रशिक्षण आवश्यक र जहाँ आफ्नो काम खोजी सुरु गर्न.
सार्वजनिक प्रशासन जब छन् जब सार्वजनिक सेवा कि. यी कार्यहरू धेरै मा, तपाईं सरकार लागि काम गरिनेछ - यो स्थानीय हुन सक्छ, राज्य, वा संघीय (राष्ट्रिय) सरकार. या तपाईं एक गैर लाभ संगठन को लागि काम गर्न सक्छ. यो मदत देखि केहि हुन सक्छ मान्छे एक दान लागि सहयोग संकलन गर्न आवास फेला.
सार्वजनिक प्रशासन जब र सेवाको सुलझाने समस्या सामना अक्सर प्रदान. समस्या जीवनको भाग हो, र त्यहाँ सधैं यी समस्याहरू निपटने गर्न इच्छुक छन् जो मान्छे को लागि एक मांग छ. तपाईं चुनौतीहरू चाहनुहुन्छ भने, यो मा प्राप्त गर्न रोमाञ्चक क्षेत्र हो. सरकार र सार्वजनिक प्रशासन मा एक काम जहाँ तपाईं मान्छे र आफ्नो समुदाय मदत गर्न सक्छ ठाउँ छ.
जो सार्वजनिक प्रशासन काम?
सार्वजनिक प्रशासन जब धेरै फरक मार्गबाट ​​पालन गर्न सक्छौं:
शिक्षा प्रशासक - शिक्षा सरकार सेवाहरूको ठूलो भाग हो. यस क्षेत्रमा व्यवसायी विद्यालय र कलेजहरु व्यवस्थापन.
कार्यकारी निर्देशक - एक गैर लाभ संगठन को एक निर्देशक सङ्गठनलाई अधिवक्ताओं, पैसा उठ्छ, सभाहरूमा धारण र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नियुक्त. सिक्न एक मुनाफारहित कार्यकारी निर्देशक कसरी हुन.
सार्वजनिक प्रशासन परामर्शदाता - सलाहकार सरकार एजेन्सीहरू र यस्तो नीति बनाउन रूपमा मुद्दाहरू मा गैर-लाभ सल्लाह, बजेट बैठक, र राम्रो तरिकाले कसरी व्यवस्थित गर्न.
मेयर - महापौर आफ्नो शहर र समुदाय अप बोल्न, नगर परिषद काम, र समुदाय समस्या समाधान गर्ने योजना बनाउन. महापौर निर्वाचित छन् अधिकारीहरु.
कार्यक्रम सहायक - अन्य गैर-लाभ जब एउटा राम्रो stepping पत्थर - एक कार्यक्रम सहायक कार्यक्रम व्यवस्थित र समर्थन गर्ने कार्यक्रम निर्देशक मद्दत गर्छ. सिक्न कसरी एक कार्यक्रम सहायक हुन.
मामला प्रबन्धक - एक मामला प्रबन्धक आफ्नो विशेष परिस्थिति मान्छे मद्दत गर्छ, वित्तीय रूपमा यस्तो, कानुनी, चिकित्सा, काम, वा आवास मुद्दाहरू. द्विभाषी कौशल मांग गर्दै छन्, त्यसैले यो शरणार्थी र आप्रवासी लागि एक उत्कृष्ट पेसा हुनेछ.
कार्यक्रम विश्लेषक - कार्यक्रम विश्लेषकहरूले कार्यक्रम मूल्याङ्कन र तिनीहरूलाई विश्लेषण गरेर सुधार, तिनीहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तरिका फेला गर्न. यो बहुमूल्य विशेषज्ञता रूपमा सरकार र गैर-लाभ थुप्रै कार्यक्रम बाहिर मद्दत संग सुधार गर्न सकिन्छ छ.
अनुवादक र दोभासे - व्याख्याकारों बोलेका शब्द र कुराकानी काम, र अनुवादकहरू लेखिएको शब्दहरू काम. एउटै व्यक्ति दुवै जब गर्न सक्नुहुन्छ. यी शरणार्थी र आप्रवासी लागि ठूलो जब छन्. सिक्न कसरी एक अनुवादक वा दोभासे हुन.
आवास विशेषज्ञहरु - यी करियर मा काम गर्ने परिवार सहयोगको लागि जिम्मेवार छन् मान्छे किफायती आवास फेला. किफायती आवास को लागि आवश्यकता भएकोले शरणार्थी र आप्रवासी लागि बढ्दो छ, यो मा हेर्न ठूलो क्यारियर हुनेछ.
अनुसन्धान एसोसिएट - यदि तपाईं अनुसन्धान र साक्षात्कार सञ्चालन रुचि राख्नुहुन्छ, र उत्पादन सामाग्री र रिपोर्ट, यो तपाईं को लागि एक उत्कृष्ट पेसा हुनेछ.
सार्वजनिक प्रशासन मेरो लागि सही काम छ?
तपाईं सार्वजनिक काम मनपर्छ भने, यो तपाईं को लागि एक राम्रो क्यारियर क्षेत्र हो. संचार क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ - तपाईं राम्रो लेखन कौशल र राम्रो अंग्रेजी कौशल आवश्यक हुनेछ.
पनि, तपाईं सदुपयोग गर्न आफ्नो नव आगन्तुक सम्पत्ति राख्न सक्छ! आफ्नो भाषा कौशल र अन्य संस्कृतिका समझ कुनै पनि क्षेत्रमा मूल्यवान हुनेछ तपाईं आप्रवासी मदत वा अन्य देशहरूमा संग काम गर्दै छन् जहाँ.
के तपाईं पक्का छैनन् भने यदि यो तपाईं को लागि सही क्यारियर छ, तिमी सक्छौ careeronestop.org मा एक आत्म-मूल्यांकन परीक्षण लिन. तपाईं पनि गर्न सक्छन् सरकार र सार्वजनिक प्रशासन जब बारेमा एक भिडियो हेर्न.
तपाईं धेरै तरिकामा सार्वजनिक सेवा क्यारियर मा प्राप्त गर्न सक्छन्.
आफ्नो अनुभव प्रयोग
किनभने आफ्नो पछिल्लो काम अनुभव केही सार्वजनिक प्रशासन जब मा प्राप्त गर्न सक्छन्. मान्छे धेरै अन्य क्षेत्रहरू देखि सार्वजनिक प्रशासन प्रविष्ट: विज्ञान, मार्केटिङ, स्वास्थ्य, व्यापार, र शिक्षा. जस्तै, यदि तपाईं एक शिक्षकको रूपमा काम गरेको छ, तपाईं शिक्षामा एक प्रशासनिक काम मा स्थानान्तरण सक्छ. तपाईं एउटा सानो आवास गैर लाभ लागि काम भने, तपाईं मान्छे आवास फेला पार्न मद्दत गर्छ जसले एक मामला प्रबन्धक हुनुको मा एक दोभासे बाट सार्न सक्छ. तपाईंले पहिले नै कुनै पनि काम मा सार्वजनिक कर्मचारी छन् भने, त्यो पनि मद्दत गर्न सक्छ.
धेरै हाकिमहरूले थप विशिष्ट प्रमाणहरू खोज्न हुनेछ. तिनीहरूले एक एसोसिएट गरेको डिग्री वा सार्वजनिक प्रशासन मा स्नातक गरेको डिग्री कसैले गर्न सक्नुहुन्छ, तर अक्सर एउटा सम्बन्धित क्षेत्रमा अर्को डिग्री गर्नेछ - सामाजिक काम, व्यवस्थापन, र संचार योग्यता सार्वजनिक प्रशासन करियर सबै उपयोगी छन्. सार्वजनिक प्रशासन मा एक मास्टर गरेको (MPA) सरकार मा काम गर्न चाहने मान्छे को लागि एक शीर्ष योग्यता छ. यो सामान्यतया आफ्नो स्नातक गरेको डिग्री माथि अर्को दुई वर्ष लाग्छ.
एक प्रमाणित सार्वजनिक प्रबन्धक (सीपीएम) एक प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ जो कुनै छ. तपाईं पहिले नै सार्वजनिक कर्मचारी भने, यो प्रशासन मा प्राप्त गर्न एक तरिका हुनेछ. एक सीपीएम पाठ्यक्रम फेला.
यो तपाईं काम गर्दा अनलाइन एक MPA प्राप्त र सार्वजनिक कर्मचारी वा एक गैर लाभ संग अनुभव हासिल गर्न सम्भव छ. MPA कार्यक्रममा अनलाइन विद्यालय फेला.
धेरै सामुदायिक कलेजहरु सार्वजनिक प्रशासन मा करियर सक्छ कि पाठ्यक्रम प्रस्ताव. एक विशिष्ट पाठ्यक्रम सार्वजनिक व्यवस्थापन समावेश गरिनेछ, निर्णय लिने, नागरिक सेवा, बजेट, सार्वजनिक संगठन, र सार्वजनिक-क्षेत्र प्रशासन. तपाईं नजिकै एक समुदाय कलेज फेला.
तपाईं एक स्थानीय संगठन मा स्वयं द्वारा अनुभव पाउन सक्छौं. तपाईं सिक्न कसरी गैर-मुनाफा काम, आफ्नो नेतृत्व र संचार सीप सुधार, र आफ्नो नेटवर्क निर्माण. मा स्वयंसेवक एक स्थान फेला पार्न Volunteermatch.org.
तपाईं अर्को देशमा एक सार्वजनिक प्रशासन डिग्री छ भने, Upwardly विश्व काम-अधिकार आप्रवासी मद्दत गर्छ, शरणार्थी, asylees, र विशेष आप्रवासी भिसा धारकों (SIVs) संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो व्यावसायिक करियर पुनः सुरु.
तपाईं अमेरिकी सरकार लागि काम गर्न चाहनुहुन्छ, स्थानीय सरकार, वा एक गैर लाभ संगठन को लागि? यहाँ केही विकल्पहरू छन्:
खोज अनलाइन काम वेबसाइट
Idealist.org सूची गैर-मुनाफा संग जब.
प्रयोग सरकार वेबसाइटहरु
आफ्नो राज्य सरकार संग को लागि जब हेर्न, आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट सुरु. यसलाई पछि आफ्नो राज्य को नाम हुनेछ “.gov” - उदाहरणका लागि, Montana.gov. गृह पृष्ठमा, तपाईं जस्तै केही भन्छन् कि ट्याब पाउनुहुनेछ करियर, रोजगार, कार्यबल वा जब. अमेरिकी सरकार छ एक वेबसाइट सरकार जब लागि. सामान्यतया, तपाईं संघीय सरकार लागि काम गर्न अमेरिकी नागरिक हुन छ, तर अपवाद छन्. आफ्नो भाषा कौशल आवश्यक हुन सक्छ, जस्तै.
आफ्नो स्थानीय रोजगार केन्द्र प्रयोग
हरेक शहरमा सरकार रोजगार केन्द्र मुक्त छन्. तिनीहरूले सल्लाह प्रस्ताव र स्थानीय जब सूची राख्न. तिनीहरूले काउन्टी र शहर र गैर लाभ जब समावेश गरिनेछ. तपाईं पनि प्राप्त त्यहाँ मदत गर्न सक्छ रिजुमेहरू र काम आवेदन संग. तिनीहरूले काम प्रशिक्षण र शिक्षा तपाईं जडान गर्न सक्नुहुन्छ. फेला आफ्नो निकटतम रोजगार केन्द्र.
एक गैर लाभ कार्यकारी निर्देशक कसरी हुन
कसरी अनुवादक वा दोभासे हुन
एक गैर लाभ कार्यक्रम सहायक कसरी हुन